को हुन् एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पन्त ? | Kendrabindu Nepal Online News
5558570 348383 2876860 2333327
को हुन् एनआरएनएका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पन्त ?
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १०:४४
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्यलाई पछि पार्दै पन्त विजयी भएका हुन् ।
गोरखा फुजेलका स्थायी बासिन्दा पन्त सन् १९९९ देखि जर्मनीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । पन्त यसअघि एनआरएनएको दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष थिए ।
पन्तले उम्मेदवार हुँदा लगानीमा योगदान, सम्मानपूर्ण वैदेशिक रोजगारी, नागरिकता र मतदानको अधिकार, दिगो संगठन र व्यापक सहभागिताका पाँच मन्त्र सार्वजनिक गरेका थिए । निर्वाचित भएपछि पन्तले आफुले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने जनाएका छन् ।
उनी सन् १९९७ मा पढ्न ग्रीस गएका थिए । केही महिना ग्रीस बसेर उनी जर्मनी गए । उनले जर्मनीबाटै राजनीतिशास्त्रमा स्नातक गरे । जर्मन पुगेको केही समयमा उनले होटलमा काम सुरू गरे । कोरियनले सञ्चालन गरेको होटलमा उनी चार वर्षसम्म म्यानेजर भएर काम गरे । त्यसपछि उनले आफैंले होटल किने ।
३६ कोठाको एउटा होटलबाट व्यवसाय सुरू गरेका पन्तका अहिले जर्मनी, बेल्जियम, स्वीट्जरल्याण्ड लगायत देशमा २९ वटा होटल छन्।
सन् २००४ सालमा एनआरएनए जर्मनी राष्ट्रिय परिषद् गठन गरी क्षेत्रीय सदस्य बने। केही महिनापछि उनी संयोजक बने । सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, २०११ मा युरोप क्षेत्रको संयोजक निर्वाचित भएका उनी २०१३ देखि १५ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महासचिव बनेका थिए ।
Kumar panta, NRNA, NRNA Nepali, एनआरएनए
Prevएनओसी अब अनलाइनबाटै लिन सकिने
कार्यकर्ता पक्राउको प्रतिरोध गर्ने विप्लवको चेतावनीNext
एनआरएनएले वाइडबडी जहाज चार्टर गरेर कोरिया पठाउने
कोरोना पीडितको सहयोगार्थ एनआरएनए पूर्वअध्यक्षको सक्रियता
सरकार र एनआरएनएबीच १७ बुँदे सम्झौता (विस्तृत)